Ambient temperature - Engelska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: ambient temperature : 10 to 70 ℃ (Engelska - Burmesiska)
The Chinese experience with testing has shown the accuracy is only 60 to 70%.
စမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တရုတ်တို့၏ အတွေ့အကြုံက တိကျမှန်ကန်မှုမှာ 60% မှ 70% သာ ရှိကြောင်း ပြသနေသည်။
Indeed,acryo-EM study indicatesa10- to 20-fold higher affinity of this binding than that between human ACE2 and SARS-CoV S protein.
အမှန်တကယ်ပင် cryo-EM လေ့လာမှုက လူသား ACE2 နှင့် SARS-CoV S ပရိုတိန်းများကြားရှိ နှီးနွှယ်ပေါင်းစပ်မှုထက် 10ဆမှ အဆ20အထိ ပို၍မြင့်မားသော နှီးနွှယ်ပေါင်းစပ်မှုရှိသည်ကို ညွှန်ပြထားပါသည်။
However, only N95 (series # 1860s) masks can protect against the inhalation of virions as small as 10 to 80 nm, with only 5% of the virions being able to penetrate completely; SARS-CoV-2 is similar to SARS-CoV in size and both are approximately 85 nm.
သို့သော် N95 (စီးရီး # 1860 များ) နှာခေါင်းစည်းများကသာ 10 နာနိုမီတာမှ 80 နာနိုမီတာအထိ သေးငယ်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်အမှုန်အမွှားများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်အမှုန်အမွှား 5% သာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ SARS-CoV-2 သည် အရွယ်အစားအားဖြင့် SARS-CoV နှင့် တူညီပြီး ဗိုင်းရပ်စ်နှစ်ခုလုံးမှာ 85 နာနိုမီတာ အရွယ်အစားခန့် ရှိသည်။
He decided to turn himself in on July 10 to complete the remaining time of his sentence (two months and six days) during the summer holidays, expecting to be released on September 16.
ကျွန်တော့်၏ ပညာရည် ထူးချွန်မှု နှင့် အောင်မြင်မှုရ ရလာဒ်တစ်ခု" ဟုရေးခဲ့သည်။ သူ၏စာထဲတွင် သူပထမဆုံး အဖမ်းခံခဲ့ရသော အချိန်တွင် မည်မျှ စိတ်အားပျက်ခဲ့ပုံ၊
støtteniveauernes (Danska>Engelska)agora estou gravida tenho medo de te perder (Portugisiska>Engelska)keičiantis lietuvos respublikos teisės aktams (Litauiska>Engelska)maraming customer (Engelska>Tagalog)arbor (Tagalog>Engelska)blavezh (Bretonska>Franska)voyager (Engelska>Franska)marefu (Swahili>Franska)es tu culpa (Spanska>Engelska)ציטוזול (Hebreiska>Franska)kasingkahulugan ng paglisan (Tagalog>Engelska)slovacchia (Italienska>Tjeckiska)couper (Franska>Bretonska)blaupunkt (Tyska>Engelska)kasingkahulugan ng eksperto (Engelska>Tagalog)essay on pokhara (Engelska>Nepali)dishonest meaning (Engelska>Tagalog)flute (Engelska>Rumänska)ungebahnte (Tyska>Norska)verano (Spanska>Bulgariska)anteeksi, että ilmoitan näin myöhään (Finska>Svenska)kiaw (Engelska>Tagalog)meri kya help chahiye bolo (Hindi>Engelska)what is stuffing bread (Engelska>Tagalog)my heart hurts (Engelska>Latin)